Afghanistan: Qalabkii sirdoonka ee aan dadka u adeegsan jirnay baan hadda qaati ka taaganahay oo wadna qabad nagu noqoday
Sunday October 17, 2021 - 07:38:23 in Wararka by Hargeisa Head OFFICE
Ku dhawaad laba bilood ayaa laga joogaa markii la soo afjaray dadkii laga daadgureynayay Kabul. Dowladda UK ayaa weli ku dedaalaysa inay dalkaas ka saarto dadka nugul iyadoo cadaadis diblomaasi saaraysa Taliban.
Dadka weli gudaha Afghanistan ku dhuumaalaysanaya waxaa kamid ah koox ka shaqeyn jirtay dhegaysiga telefoonnada iyo dabagalka xogta sirdoon ee dalkaas, kuwaas oo khatar xooggan ka wajahaya Taliban.
Qalabkooda waxaa hadda gacanta ku haya ururkaas xukunka la wareegay. Qaar kamid ah kooxdaas ayaa BBC-da u warramay, codkooda iyo magacyadood ba waxaan u qarinay si aan loo aqoonsan.
Markii ay burburtay xukuumaddii Afghanistan, dad badan ayaa walaac ka muujiyay qalabka milateri ee gacanta u galay Taliban.
Balse waxaa jiray wax ka muhiimsan oo ay ka tageen xulafadii uu Maraykanka hogaaminayay.
Waa qalab muddo sano ka badan ay ku dhegaysan jireen isgaarsiinta telefoonnada iyo internet-ka ee guud ahaan dalkaas.
Waxaa inoo suuragashay in aan la hadalno qaar kamid ah dadkii ku shaqeyn jiray qalabkaas dabagalka ah, kuwaas oo hadda dhuumasho ku jira.
"Waxaan dhihi karaa in unugteena ay ahayd tan ugu muhiimsan ee dabagalka iyo aqoonsiga ku samaysa argagixisada. Waxaan qabannay hawlo badan inaga oo adeegsaneyna xogta teknoolajiyadda. Waxaa nasiib darro ah in Taliban ay maanta gacanta ku hayso qalabkan. Waxaa jira dad hadda uga shaqeeya xaruntaas, si ay u ogaataan shaqaalaha laamaha ammaanka Afghanistan. Waa arrin walaac nagu abuurtay dhammaantee."
Britain waxaa mas'uuliyad gaar ah ka saarnaa unugtaas, oo loo yaqaanay Delta 011. Waxa ay sanadkii 2001 qeyb ka ahayd yagleelideeda, waxaana ay tababar iyo mushaar siin jirtay qaar badan oo kamid ah shaqaalaha unugtaas.
Waxaan ogaannay in ilaa 25 kamid ah shaqaalaha unugtaas laga soo daadgureeyay Afghanistan, balse waxaa jira qaar badan oo ay kamid yihiin laba nin oo aan ognahay inay soo codsadeen in laga bixiyo dalkaas oo weli aan loo gurman.
Saraakiil ka tirsan Britain ayaa noo sheegay in aysan u suuragelin inay soo daadgureeyaan dhammaan dadkii u shaqeeyay unugtaas, oo ay xoogga saareen xubnaha hadda ka tirsan, arrintaas oo su'aal la geliyay.
"Waxaan ka xumahay, balse waa been laga xishoodo. Waxaan shaqaalo u ahayn unugta Delta 011. Dadka ay daadgureeyeen waxaa kamid ah kuwa cunnada kariya, waardiyayaasha iyo kuwa nadaafadda ka shaqeeya ee waaxda sirdoonka."
Saraakiisha Britain ayaa ku doodaya in aysan mas'uuliyad ka saarneyn shaqaalaha Delta 011, maadaama aysan wax heshiis ah la gelin, balse xubnaha unugtaas ee aan la hadalnay ayaa sheegay in Britain ay dhaqaalo xooggan ku kabi jirtay unugtaas, isla markaana uu jiray heshiis wada shaqeyn oo kala dhexeeyay hay'adda sirdoonka Britain ee SIS.
"Waxa uu ahaa hawlgal ay wadajir u wadeen waaxda sirdoonka Afghanistan iyo SIS. Wax kastana waxay ku qeexnaayeen heshiis is-afgarad ah oo dhexmaray labada dhinac. Waxaa mushaarkeena bixin jiray xukuumadda Afghanistan iyo weliba Britain, balse waxaa shaqada nagu korjoogteyn jiray SIS, waxaana madax noo ahaa SIS."
Saddex kamid ah ragga aan la hadalnay ayaa horay UK ugu qaatay tababar gaar ah oo ku saabsan habka loo dhegaysto telefoonnada.
Muuqaal ay nala wadaageen ayaa muujinaya tababare British ah oo baraya habka loo weeciyo wicitaannada telefoonka.
Dadka tababarka noocaas ah la siiyay ayaa faraha looga qaaday gudaha Afghanistan. Mana jirto cid diyaar u ah inay caawiso.
"Waxaa nasiib darro ah in dad aan kamid ah oo la shaqeeyay Maraykanka iyo UK na looga tagay xaalad noocan ah. Daqiiqad kasto waxaan wajahaynaa khatar noolasheena ah. Waxay ahayd in nala daadgureeyo. Waxaa se na looga tegay xaalad adag oo cabsi leh."
Taliban oo hadda gacanta ku haysa Afghanistan ayaa qalabkaas u adeegsan rabta inay ku beegsadaan cadowgooda. Qaar kamid ah shaqaalihii Delta 011 ayaa oggolaaday inay la shaqeeyaan Taliban, waxaana ay rabaan inay sidoo kale qanciyaan kuwa dhuumanaya ee cabsida qaba.
Afhayeen u hadlay xukuumadda UK ayaa sheegay inay weli ku dedaallayaan sidii ay u soo saari lahaayeen dadka doonaya inay ka baxaan Afghanistan. Barnaamij dib u dejin ah ayaa loo fidiyay dadka UK kula shaqeeyay Afghanistan, waxaana uu wei u furan yahay dadka buuxiya shuruudaha lagu xiray.